Ụgbọ elu Johannesburg na Cape Town na South African Airways ugbu a
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Ụgbọ elu Johannesburg na Cape Town na South African Airways ugbu a
Ndị njem nlegharị anya nke Africa • Airlines • Airport • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • News • ndị mmadụ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Akụkọ kacha ọhụrụ na South Africa • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Nlaghachi nke SAA ga -enyekwu nha nhatanha n'ahịa maka ọnụahịa tiketi. Ebe ọ bụ na onye ọrụ ụgbọelu batara wee pụọ na nzọpụta azụmahịa enwechaghị ikike mpaghara yana nke ahụ pụtara na tiketi adịla ọnụ. Ịlaghachi SAA na mbara igwe ga -apụta ọnụ ahịa asọmpi ga -enyere ọtụtụ ndị South Africa aka ife efe.
Ka emechara nkwadebe ọnwa, South African Airways maliteghachikwara ọrụ ụlọ na mpaghara Africa.
Ụgbọ elu South Africa Airways nke mbụ haziri ga -esi na Johannesburg gawa Cape Town na Septemba 23.
A na -atụkwa anya na ụgbọ elu ga -amalite n'isi obodo ise nke Afrịka - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka na Maputo.
N'ịgbaso ọnwa nkwadebe ka hapụtasịrị nzọpụta azụmaahịa, South African Airways (SAA) maliteghachikwara ọrụ ụlọ na mpaghara Africa. Onye na -ebu ya bụ nke mbụ
Ụgbọ elu ahaziri ahazi bụ isi n'ụtụtụ OR Tambo International na Johannesburg na-aga Cape Town International na Septemba 23 ma ọ bụ otu n'ime ụgbọ elu nloghachi atọ kwa ụbọchị n'etiti obodo abụọ ahụ. A na -atụkwa anya na ụgbọ elu ga -amalite n'isi obodo ise nke Afrịka - Accra, Kinshasa, Harare, Lusaka, na Maputo.
Onye isi oche obere oge nke SAA Thomas Kgokolo na -ekwu, “Izu a bụ ihe mpako na ihe dị mkpa maka SAA na ndị ọrụ ya yana ụmụ amaala South Africa niile. Njem anyị ịlaghachi na mbara igwe adịghị mfe, ana m asọpụrụ ndị ọrụ anyị raara onwe ha nye na mpaghara azụmahịa niile onye ọ bụla nwere ma na -etinye ogologo awa tupu ụbọchị a. Ndị mmadụ n'akụkụ ọ bụla nke azụmahịa ahụ achọghị ihe ọ bụla karịa ka SAA nwee ihe ịga nke ọma yana ka anyị wuo ụgbọ elu ọhụrụ dabere na nchekwa yana ọrụ ndị ahịa kwesịrị nplaomi. ”
Kgokolo na -ekwu mgbe South African Airways nwere nnukwu ọchichọ ọ na -akachasị mma ga -abụ nke njikwa mmefu ego nke ezi uche dị na ya yana itinye aka na nghọta. “Anyị na -amalitegharị azụmaahịa a na ọhụụ ọhụụ nke mpako na ika na nke etinyere n'ime ndị ọrụ ọ bụla. Usoro mbu nke azụmahịa anyị bụ ịre anyị ọrụ
ụzọ mmalite na-arụ ọrụ nke ọma na nke bara uru wee leba anya n'ịgbasa netwọkụ ma na-eto ụgbọ mmiri anyị, ha niile dabere n'ọchịchọ na ọnọdụ ahịa. "
Onye isi oche SAA John Lamola na -ekwu, "Nlaghachi nke SAA ga -eweta nha nha ahịa karịa na ọnụahịa tiketi. Ebe ọ bụ na onye ọrụ ụgbọelu batara wee pụọ na nzọpụta azụmahịa enwechaghị ikike mpaghara yana nke ahụ pụtara na tiketi adịla ọnụ. Nlaghachi anyị na mbara igwe ga -apụta ọnụ ahịa asọmpi ga -enyere ọtụtụ ndị South Africa aka ife. "
Lamola kwuru SAAỊlaghachi na mbara igwe bụkwa nnukwu ihe na -enyere akụ na ụba aka, ọkachasị na -elekwasị anya na ụgbọ elu ibu. “Banyere akụnụba, ewezugakwa mpako. Ịhụ agba ọdụ ọdụ SAA na tarmac mba ụwa abụghị naanị ihe dị mma maka South Africa kamakwa mpaghara ndị ọzọ nke kọntinent ahụ. ”
SAAOnye isi nwa oge: Commercial Simon Newton Smith na -ekwu, “Anyị nọ n'ọtụtụ ụzọ, atụ maka obodo; ọ bụghị mgbe niile ka ọ kacha nwee akụkọ ihe mere eme, mana ọ na -eguzogide, ndị ya na -anya isi n'ụzọ ziri ezi na ọ bụ obodo a na -agaghị eleda anya. Ọrụ anyị bụ igosi ụwa na South Africa na -agbake ma malite njem ahụ ka ọ gbakee nke ọma. Anyị na-amalite ọzọ dị umeala n'obi mana anyị nwere nnukwu ebumnuche. ”
Onye isi ụgbọ elu SAA Mpho Mamashela na -ekwu “Anyị niile ga -anọ n'ihu ụgbọ elu n'izu na ọnwa ndị na -abịanụ ghọtara nke ọma ọhụụ ọhụrụ nke SAA ma anyị nwere mpako ịbụ akụkụ nke oge ọhụrụ a. Anyị kpebisiri ike ịbụ ndị zuru oke na ime ka ndị South Africa dị mpako. "